अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, २१ बैशाख , २०७५
चरम भ्रष्टाचार, राजनीतीकरण र बेथितिबाट ग्रस्त स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन दशकयता मुश्किलले थोरै मात्र आशलाग्दो नेतृत्व पाएको छ। तिनैमध्ये पर्छन्, नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल।
२ चैत २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त एमालेकी पद्माकुमारी अर्यालले एउटा यस्तै दुर्लभ अवसर पाएकी छिन्। तर, यस्तो अवसरलाई राज्यमन्त्री अर्यालले कसरी लिएकी छिन् ? मन्त्रालयका समस्या र चुनौतीसँग जुध्ने उनका के कस्ता योजना छन् ? राज्यमन्त्री अर्यालसँग हिमाल ले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
पद्माकुमारी अर्याल, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री । तस्वीरः बिक्रम राई